ဒီဇင်္ဘာလမှာ နားဆင်နိုင်တဲ့ ဂီတသတင်း6မျိုး | Bezzia
ဂီတသတင်း ၆ ခုကို ဒီဇင်္ဘာမှာ နားဆင်နိုင်ပါတယ်။
မာရီယာ vazquez | 02/12/2021 12:00 | အဆင့်မြှင့်တင် 29/11/2021 12:06 | ယဉျကြေးမှု
ဒီဇင်ဘာလတွင် အယ်လ်ဘမ်ထုတ်ဝံ့သူ အများအပြားမရှိသော်လည်း ပထမနှစ်ပတ်အတွင်း ပရိသတ်အားလုံး စုမိသောအခါတွင် ဖြန့်ချိမှုအနည်းငယ်မှာ ပိုပုံပေါ်သည်။ ခရစ္စမတ်မရောက်မီ. ဤဂီတအသစ်အဆန်းများထဲတွင် ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့တင်ပြသော အယ်လ်ဘမ်ခြောက်ခုကဲ့သို့သော အရေးကြီးသော စုစည်းမှုများနှင့် စာသားအသစ်အဆန်းများစွာကို သင်တွေ့ရှိရမည်ဖြစ်ပါသည်။
2 လူမည်း- ရီကာဒို အာဂျိုနာ
4 သော့များ - Alicia Keys
5 ငါအရင်ကထက် ပိုချမ်းသာတယ် - Rick Ross
6 Burgos သီချင်းစာအုပ်အသစ် - The Wonderful Alcohol Orchestra
Estrella Morente သည် မနက်ဖြန်တွင် Leo ကို ပြသမည်ဖြစ်သည်။"သူသည် ၎င်း၏ အရင်းနှီးဆုံးနှင့် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ စကြာဝဠာကို ထုတ်ဖော်ပြသသည့် စတူဒီယိုအယ်လ်ဘမ်အသစ်" ဖြစ်သည်။ အယ်လ်ဘမ်တွင် tango မှ fandango အထိ Huelva မှ အသည်းကွဲ ranchera သီချင်းဆယ်ပုဒ်ကို စုစည်းပေးထားသည်။
တိုးတက်လာတာနဲ့အမျှ သူတို့ပြောတာကို ကြားနေရတယ်။Andalusian အောက်မေ့ဖွယ်အမှတ်တရများပါရှိသော Estrella Morente မှ အသန့်ရှင်းဆုံး flamenco ဖြင့် တင်ဆောင်ထားသည့် ဆောင်ပုဒ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းသည် အမြစ်များနှင့် ဆန်းသစ်သော စည်းချက်များဖြင့် ပေါင်းစပ်ထားသည့် ဤအလုပ်၏ ထူးခြားသောဇာတ်ကောင်အတွက် မိတ်ဆက်စာအဖြစ် အလုပ်လုပ်သည်။
လူမည်း- ရီကာဒို အာဂျိုနာ
မနက်ဖြန် အနက်ရောင် အလင်းတန်းတွေလည်း မြင်ရလိမ့်မယ်၊ Black and White ပရောဂျက်၏ ဒုတိယအပိုင်း Ricardo Arjona မှ အဆိုတော် တေးရေးဆရာသည် 60 ခုနှစ်များက အသံကို လောင်းကြေးထပ်ကာ အဓိကဇာတ်ဆောင်အဖြစ် ဂီတ၏ အနှစ်သာရကို ပြန်လည်ရယူသည့် အလုပ်ဖြစ်သည်။ ဒီအခွေမှာ Covid-6 ကပ်ရောဂါရဲ့ အလယ်မှာ ရေးထားတဲ့ သီချင်း ၆ ပုဒ်နဲ့ လန်ဒန်မှာရှိတဲ့ Abbey Road Studios မှာ ရိုက်ကူးထားတဲ့ သီချင်း ၈ ပုဒ် ပါဝင်ပါတယ်။
ကိုယ်တိုင်မြင်ခဲ့တယ် (Self-portrait) အယ်လ်ဘမ်၏ ပထမဆုံးကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုအဖြစ် တင်ဆက်ခဲ့သည်။ သီချင်းကောင်းများစာရင်းကို နားဆင်နိုင်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည့် အယ်လ်ဘမ်တစ်ခုဖြစ်သည့် The crush and the sequel, From illusion to fear, The fool, She know, It does not change, Flow and Penthouse.
ဒီဇင်ဘာ 10 ရက်သည် Enrique Bunbury ၏ El Puerto EP ထွက်ရှိမှုအတွက် ရွေးချယ်ထားသောနေ့ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်5ပုဒ်အခွဲတစ်ခုဖြစ်သည်။ Paco Loco ဖြင့် El Puerto de Santa María (Cádiz) တွင် မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။. တိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှ ကျွန်ုပ်တို့သည် José José နှင့် Before Breakfast တို့၏ ဂန္တဝင် အယ်လ်ထရစ်စတီဗားရှင်းကို နားဆင်နိုင်နေပြီဖြစ်သည်။
သော့များ - Alicia Keys
ဒီဇင်ဘာ 10 အတွက် ဂီတသတင်းများထဲတွင် Keys၊ Alicia Keys ၏ အဋ္ဌမမြောက် စတူဒီယိုအယ်လ်ဘမ်လည်း ဖြစ်သည်။ သီချင်း ၂၆ ပုဒ်ပါသော နှစ်ထပ်အယ်လ်ဘမ် A side 'originals' (originals) 'relaxed piano vibes' နှင့် B side 'unlocked' ဟူသော 'upbeat, drums' ဖြင့် ပိုင်းခြားထားသည်။ Side A ကို Alicia မှ ထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီး Side B သည် မူရင်းနမူနာကို သူမနှင့်အတူ Mike Will Made It (Kendrick Lamar) နှင့် အနုပညာရှင်မှ ဖန်တီးထားသည်။
«ဇာတ်လမ်းတိုင်းမှာ ဘက်နှစ်ဘက်ရှိတယ်။Keys သီချင်းတိုင်းမှာ နှစ်ဖက်စလုံးက နှစ်ဘက်ရှိပါတယ်၊ ဒါကြောင့် မင်းငါ့ကို နှစ်ဘက်စလုံးသိတဲ့ ခံစားချက်ကို ရလိမ့်မယ်" လို့ Alicia Keys က ဒီအလုပ်သစ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး မှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ အယ်လ်ဘမ်အပြည့်အစုံကို နားဆင်ရန် တစ်ပတ်ခန့် စောင့်ရသော်လည်း၊ Swae Lee နှင့် Best of me တို့နှင့်အတူ Lala (Unlocked) ဗီဒီယိုကို ဗားရှင်းနှစ်မျိုးစလုံးတွင် နားဆင်နိုင်နေပြီဖြစ်သည်။
ငါအရင်ကထက် ပိုချမ်းသာတယ် - Rick Ross
အရင်ကထက် ပိုချမ်းသာတယ်။ Rick Ross ၏ ဆယ်ခုမြောက် စတူဒီယိုအယ်လ်ဘမ်နှစ်နှစ်အတွင်း သူ့ရဲ့ပထမဆုံး LP ပါ။ ဒီဇင်ဘာလ 10 ရက်နေ့တွင်ထွက်ရှိမည်ဖြစ်သော်လည်း 21 Savage နှင့် Jazmine Sullivan တို့နှင့်အတူ ၎င်း၏ပထမဆုံးအကြိုကြည့်ရှုမှုကို ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်း ကျွန်ုပ်တို့ကြားသိနိုင်ပြီဖြစ်သည်။
Burgos သီချင်းစာအုပ်အသစ် - The Wonderful Alcohol Orchestra
ဒီဇင်ဘာလ 17 ရက်နေ့တွင် La Maravillosa Orquesta del Alcohol ၏အယ်လ်ဘမ်အသစ် Burgos သီချင်းစာအုပ်ထွက်ရှိလိမ့်မည် သူ့ပြည်၏ ကျော်ကြားသော ဇာတ်ဝင်ခန်းမှ မှုတ်သွင်းသည်။. တေးဂီတကို အခမ်းအနားအတွက် အဖွဲ့မှ ရေးစပ်ထားပြီး သီချင်းစာသားကို Federico Olmeda နှင့် Antonio José တို့၏ 'Cancioneros burgaleses' စာအုပ်နှစ်အုပ်မှ ကူးယူထားပါသည်။ « NCB မှ Federico Olmeda (1903) နှင့် Antonio José (1932) ရေးသော လွန်ခဲ့သော ရာစုမှ စာအုပ်နှစ်အုပ်ကို ရှာဖွေတွေ့ရှိပြီးနောက် Burgos မှ လူကြိုက်များသော သီချင်းများကို စုစည်းဖော်ပြပါသည်။ ခေါင်းစဉ်သည် ဤသီချင်းစာအုပ်များအတွက် ဂုဏ်ပြုခြင်းဖြစ်သည် »။
ထုတ်လုပ်သူ Gorka Urbizu (Berri Txarrak)၊ Jordi Mora မှ အသံသွင်းပြီး ရောစပ်ကာ Víctor Garcia မှ ကျွမ်းကျင်သော အယ်လ်ဘမ် S COMPONE ကို ဖြတ်တောက်မှု 8 ခုပါရှိသည်။ Miraflores သည် No canto yo y Mañana voyaBurgos အဆက်မပြတ်ပေးထားသော ပထမဆုံး single single ဖြစ်သည်။
ဒီဂီတသတင်းတွေထဲက ဘယ်သတင်းကို ကြားချင်လဲ။ တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပါ။ နိုဝင်ဘာလထုတ်များ တစ်ခုခုလွဲချော်ခဲ့ရင်
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Bezzia » လက်ဆောင် » ယဉျကြေးမှု » ဂီတသတင်း ၆ ခုကို ဒီဇင်္ဘာမှာ နားဆင်နိုင်ပါတယ်။
အပူသုံးစွဲမှုကို လျှော့ချပါ- ချွေတာရန် လက်တွေ့ကျသော စိတ်ကူးများ